निषेधाज्ञा एक साता थपिने, नाकामा कडाई गरेर काठमाडौंमा खुकुलो पारिने – Digital Khabar
निषेधाज्ञा एक साता थपिने, नाकामा कडाई गरेर काठमाडौंमा खुकुलो पारिने
२८ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा जेठ ३१ पछि पनि एक साता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी भएको छ । उपत्यकामा तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच एक साता निषेधाज्ञा थप गरिने गृहकार्य भएको हो । निषेधाज्ञा थप गर्ने विषयमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच यस विषयमा छलफल भइरहेको जनाईएको छ ।
एक साता निषेधाज्ञामा कडाई गरेर पुनः विस्तारै खुला गर्ने तयारी भएपनि पुनः एक साता थप गर्ने तयारी भएको हो । एक साता निषेधाज्ञा थप गर्ने विषयमा छलफल भएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निषेधाज्ञा गर्दापनि कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी नआएपनि पुनः एक साता थप गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
उनले निषेधाज्ञा एक साता थप गरेतापनि केही खुकुलो भने हुनसक्ने जानकारी दिए ।
काठमाडौं भित्रने तथा बाहिरिने नाकामा कडाई गर्ने तयारी भएको छ । निषेधाज्ञाको समयमा उपत्यकामा संक्रमतिको संख्यामा कमी नआएपछि नाकामा कडाई गरी तीन जिलामा खुकुलो बनाइन लागिएको हो ।
यसअघि बिहान ९ बजेसम्म मात्र किराना, खाद्यान्न तथा डिपार्टमेण्टल स्टोरहरु खुला भएकोमा एक घण्टा थप गरेर १० बजेसम्म खुल्न दिईनेछ भने विकास निर्माणका कामहरु सुचारु हुनेछन ।
दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमितको संख्यामा बृद्धि भएको भन्दै गत बैशाख १६ गतेदेखि उपत्यकाका तीन जिल्लामा निषेधात्रा लागु गरिएको हो ।
Comment on “विन मागे मोति मिले, मागे मिले ना भिख” – कथा २ by बच्चुराम वाग्ले
Comment on पोखरीमा डुबेर पाँच बालिकाको मृत्यु by धनुषा घटनाका पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न उपप्रम महतोको निर्देशन – Digital Khabar
Comment on बनावटी समाचार बनाएर भ्रम छर्ने जुनसुकै मिडियाप्रति कडारूपमा प्रस्तुत हुन्छ : नवनियुक्त अध्यक्ष बस्नेतले by प्रेस काउन्सिलमा अध्यक्ष नियुक्तिको विरोध – Digital Khabar
Comment on अक्षय तृतियाको महत्व यस्तो रहेको छ! by सातु, सर्वत दान र सेवन गरी अक्षय तृतीया मनाइँदै – Digital Khabar
Comment on परशुराम अवतार महत्व ! by सातु, सर्वत दान र सेवन गरी अक्षय तृतीया मनाइँदै – Digital Khabar